Bafuna umengameli weSAFA eThekwini
Umengameli weSAFA uDanny Jordaan. Isithombe: safa.net
SEBEFUNA kube khona nomengameli weSouth African Football Association uDanny Jordaan, emhlanganweni ohlongozwayo ozokhipha isixazululo ngokwezepolitiki kwimpicabadala yodaba lombango wamandla okuphatha unobhutshuzwayo eThekwini.
Uzulazayithole onguPotshoza uthole ukuthi ngoMgqibelo odlule ekomkhulu leSafa eGoli kunezikhulu ezithintekayo emizameni yokuthola isisombululo odabeni lwaseThekwini, ebezibhunga emaphaseji ebhilidi ngomhlahlandlela wokuthola isixazululo saphakade kulesi sifunda esikwezinye ezinkulu zeSafa eNingizimu Afrika.
“Kuthiwa isikhalo esifakwe wuhlangothi lwaseCurries Fountain ngokuba semthethweni kwalo lunesisindo ngendlela yokuthi obhekene nehhovisi lezomthetho kwiSafa, uTebogo Mothlanthe, ufuna kube nesixazululo sezepolitiki kulolu daba ngoba uma lungase luhlalelwe yiDRC (Dispute Resolution Committee) le nhlangano iyothelwa ngehlazo. Kuthiwa utshele usihlalo wekomiti elibhekene nezindaba zezifundazwe (Membership Committee) uPaseka Kone, ukuthi yena (uMothlanthe ) ngeke ayophikisana nento iSafa eyingxenye yayo ngoba wayekhona ngesikhathi kuqinisekiswa amaLFA okuyiwona abize ukhetho okuphinde kwaqokwa uMazwi Mkhize njengomengameli weSafa eThekwini,” kusho umthombo.
Ngokuthola kwale ngwenya enguPotshoza kube yilapho-ke kuqhamuke khona umbono wokuthi umengameli weSafa naye kufanele abe khona kulo mhlangano wokuthola isixazululo saphakade.
“Kuthiwa uhlangothi lukaMkhize alunankinga uma leso sixazululo sizokubeka kucace ukuthi ngobani abasemthethweni nokuthi kube yiSafa ezobona ukuthi abaseHoy Park, eholwa ngu-Alpha Mchunu, ibabeka kuphi nokuthi umengameli wayo bamshutheka kuphi.”
Lolu hlangothi luthe phezu kokuthi iSafa ifuna kube nalesi sisombululo kodwa alufuni ukuthi udaba lwalo olukwiDRC luphazamiseke ngoba luzihambela eyalo indlela.